China Oily guruu laminating muchina KP-YJ128C Kugadzira uye fekitori | Kangpa
KP-YJ128C Performance paramende:
Magetsi: 380V 50HZ 3 chikamu
Inobudirira upamhi: 1800mm
Isa pamusoro pehupamhi: 1300mm
Kuchenesa roller zvirevo: Ø1500 * 1800mm
kudziyisa nzira: Electric kudziyisa
Bemhapemha nzira: guruu chinja unhani
Mechanical dhizaini yekumhanyisa: 0-50m / min
Yakazara simba: 50kw
Miganhu (L * W * H): Inenge 11600 * 2000 * 2200mm
uremu: About 6500kg (zvinoenderana nechigadzirwa chaicho)
KP -105X glue poindi yekuchinjisa michina yemuchina.
Zvishandiso uye Zvimiro:
Inonyanya kushandiswa kuumbiridza machira ehembe, polar dehwe, isina-dehwe, jira rekutambanudza, jira risina kurukwa, dehwe, chipanje, jira rakarukwa nezvimwe zvinhu. Inoshanda kumaindasitiri senge zvipfeko, mota yemukati, shangu neheti, mukwende, kushongedza, uye machira epamba.
4. Zvinoenderana nehunhu hwezvinhu zvakasiyana, zvimwe zvigadzirwa zvinogona kuwedzerwa kana kubviswa;
5. Inokodzera kupfeka uye kusanganisa kwemvura-inogadziriswa uye solvent-based adhesives, ichiziva basa remumwe muchina une akawanda mabasa.
6. Huwandu hweglue uye manyorerwo eglue zvinogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinhu uye izvo chaizvo zvinodiwa.
7. Iyo yekudziya dhiramu inogona kudziirwa nemagetsi, steam kana mafuta anopisa.
8. Hupamhi hwe roller nzvimbo yemuchina inogona kudomwa zvinoenderana nehupamhi hombe hweicho chaicho chinhu.
9. Iyo sisitimu yese inogona kuvhiyiwa uye kudzorwa neakangwara PLC chirongwa chekubata skrini kana meyiki mhando.
Pashure: Glue chinotenderera
Zvadaro: Four-column hydraulic yekucheka muchina
Otomatiki Inopisa Melt Glue Laminating Machine
Glue Anonyorera Roller
Anonamira Laminating Machine
Namatidza Roller Machine
Kupisa Melt Glue Anonyorera
Yakapisa Melt Glue Laminating Machine YeJasi
Kupisa Melt Glue Laminating Machine Kune Textile
Kupisa Melt Glue Laminating Machine Ine Ce Chitupa
Mvura Yakavakirwa Glue Laminating Machine
Kupisa Melt Glue Laminating Machine Ine Ce Chitupa, Pur Hot Melt guruu Nonwoven Laminating Machine, Otomatiki Inopisa Melt Glue Laminating Machine, Kupisa Melt Glue Anonyorera, Pur Hot Melt Inonamatira Laminating Machine, Yakapisa Melt Glue Laminating Machine YeJasi,